Prateek Daily: महाभारतबाट सङकलन तथा अनुवाद
Showing posts with label महाभारतबाट सङकलन तथा अनुवाद. Show all posts
त्यस भयङ्कर युद्धमा द्रोणाचार्यले हेर्दाहेर्दै व्यूह भेदन गरेर अभिमन्यु त्यसको भित्र छिरिहाले । त्यहाँ छिरेपछि उनीमाथि धेरै योद्धा जाइलागे तर वीर अभिमन्यु अस्त्र सञ्चालनमा फुर्तिलो थिए । जो जो वीर उनको सामु आए, ती सबैमाथि उनले मर्मभेदी बाण हान्न थाले । उनको तीखा बाणको मारबाट घाइते भएर धेरै जसो योद्धा धराशयी भइहाले । मरेका वीरहरूको लाश र त्यसको टुक्राबाट त्यहाँको भूमि ढाकिएको थियो । धनुष, बाण, तरबार, ढाल, अङ्कुश, तोमर आदि धेरैजसो शस्त्र र आभूषणबाट युक्त हजारौं वीरहरूको भुजाहरूलाई अभिमन्युले काटिदिए तथा रथहरूलाई भाँचिदिए । उनी एक्लैले भगवान् विष्णुको समान अचिन्तनीय पराक्रम प्रदर्शन गरे। त्यतिबेला तपाईंका पुत्र र तपाईंका पक्षका योद्धाहरू दशौं दिशातिर हेर्दै भाग्न थाले । उनीहरूको मुख सुकिसकेको थियो, शरीरबाट पसिना चुहिरहेको थियो, रौंहरू ठाडठाडा भएका थिए, नेत्र चञ्चल भइसकेका थिए। उनीहरूले शत्रुलाई जित्ने साहस गुमाइसकेका थिए । मरेका पिता, पुत्र, भाइ, बन्धु तथा सम्बन्धीहरूलाई छाडेर आप्mनो प्राणको रक्षा गर्नको लागि घोडा र हात्तीहरूलाई उत्ताउलो पारामा हाँकेर सबैजना भागिहाले । अमित तेजस्वी अभिमन्युद्वारा आप्mनो सेनालाई यस प्रकार विवश भएको हेरेर दुर्योधन अत्यन्त क्रोधित भई उनको सामु आए । द्रोणाचार्यको आज्ञाले त्यहाँ अरू पनि धेरै योद्धा त्यहाँ आइपुगेर चारैतिरबाट दुर्योधनको रक्षा गर्न थाले । यसैबेला द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनि, बृहद्वल, शल्य, भूरिश्रवा, शल, पौरव र बृषसेनले सुभद्राकुमारमाथि तीखा बाण वर्षा गरेर ढाकिदिए । यस प्रकार अभिमन्युलाई मोहित पारेर उनीहरूले दुर्योधनलाई बचाउनमा सफल भए ।
मुखबाट ग्रास खोसिएभैंm दुर्योधन बाँचेपछि अभिमन्युलाई सहन हुन सकेन । उनले बडो भीषण बाण वर्षा गरेर घोडा र सारथिसहित ती सबै महारथीलाई धपाए तथा सिंहको समान गर्जना गर्न थाले । द्रोण आदि योद्धाहरूले उनको सिंह गर्जनालाई सहन गर्न सकेनन् । उनीहरूले रथहरूबाट अभिमन्युलाई घेरामा हालेर बाण समूहको वर्षा गर्न थाले तर अभिमन्युले ती सबै बाणसमूहलाई आकाशमैं काटेर खसाल्दथे र छिट्टै तीखो बाण हानेर तिनीहरूलाई व्यथित पारिदिन्थे । उनको यो पराक्रम अद्भुत थियो । त्यतिबेला अभिमन्यु र कौरव योद्धा एकअर्कामाथि लगातार प्रहार गरिरहेका थिए । कोही पनि युद्धबाट विमुख हुन चाहिरहेका थिएनन् । त्यस घोर संग्राममा दस्सहले नौवटा बाण हानेर अभिमन्युलाई बिधिदिए, अनि दुश्शासनले बा¥हवटा, कृपाचार्यले तीनवटा, द्रोणले सत्रवटा, विविंशतिले सत्तरीवटा, कृतवर्माले सातवटा, बृहद्वलले आठवटा, अश्वत्थामाले सातवटा, भूरिश्रवाले तीनवटा, शल्यले छवटा, शकुनिले दुइटा र राजा दुर्योधनले तीनवटा बाण हाने ।
महाराज, त्यतिबेला प्रतापी अभिमन्यु मानौं नाच्दै थियो, यस प्रकार चारैतिर घुम्दै सबै महारथीलाई तीन/तीन वटा बाण हानेर व्यथित पारिरहेका थिए । अनि तपाईंका पुत्रहरूले एक साथ मिलेर उनलाई भय देखाउन थालेपछि अभिमन्यु क्रोधले मुर्मुरिएर आप्mनो महान् शस्त्रबलको प्रदर्शन गर्न थाले । यत्तिकैमा अश्मकनरेशका पुत्र बडो तीव्रताले त्यहाँ आएर अभिमन्युलाई रोकेर उनलाई दशवटा बाण हाने । अनि अभिमन्युले मुस्कान छर्दै उनलाई दशवटा बाण हानेर उनको घोडा, सारथि, ध्वजा, धनुष, भुजाहरू तथा टाउको छिनाएर खसालिदिए ।
अभिमन्युको हातबाट अश्मकराजकुमार मारिएको हेरेर सम्पूर्ण सेना विचलित भएर भाग्न थाले । अनि कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनि, शल, शल्य, भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुण्डभेदि, प्रतर्दन, वृन्दारक, ललित्थ, प्रबाहु, दीर्घलोचन र दुर्योधन–यी सबैले क्रोधित भएर अभिमन्युमाथि बाणवर्षा गर्न थाले । यी बडे बडे धनुर्धरहरूको बाणबाट घाइते भएपछि अभिमन्युले कवच र शरीरसम्मलाई छेडिहाल्ने खालको एउटा तीखो बाण कर्णमाथि हाने । त्यो बाण कवचको भेदन गरेर बडो वेगले कर्णको शरीरलाई छेडेर पृथ्वीमा पस्यो । त्यस दुस्सह प्रहारबाट कर्णलाई बडो व्यथा भयो र उनी व्याकुल भई रणभूमिमा काम्न थाले । यसै प्रकार क्रोधले भरिएर अभिमन्युले तीनवटा बाणबाट सुषेण, दीर्घलोचन र कुण्डभेदीलाई मारे ।
अनि कर्णले पच्चीसवटा, अश्वत्थामाले बीसवटा र कृतवर्माले सातवटा बाण हानेर अभिमन्युलाई घाइते तुल्याइदिए । उनको सम्पूर्ण शरीर बाणविद्ध थियो तैपनि उनी पाशधारी यमराजको समान रणभूमिमा विचरण गरिरहेका थिए । शल्यलाई आपूmनजीक नै उभिरहेको हेरेर अभिमन्युले बाणवर्षा गरेर उनलाई ढाकिदिए र तपाईंको सेनालाई भयभीत पार्नको लागि भीषण गर्जना गर्न थाले । उनको मर्मभेदी बाणबाट घाइते भएका राजा शल्य रथको पछिल्लो भागमा गइबसे र बेहोश भइहाले । शल्यको यो अवस्था हेरेर सम्पूर्ण सेना आचार्य द्रोणले हेर्दाहेर्दै भाग्यो । त्यतिबेला देउता, पित्र, चारण, सिद्ध, यक्ष तथा मानिसहरूले अभिमन्युको यशोगान गर्दै उनको प्रशंसा गर्न थाले ।
शल्यका एक सानो भाइ थिए । अभिमन्युले दाइ मद्रराज शल्यलाई रणभूमिमा मूच्र्छित पारेको सुनेर उनी क्रोधले मुर्मुरिएर बाणवर्षा गर्दै उनको सामु आए । आउनेबित्तिकै उनले दशवटा बाण हानेर अभिमन्युलाई घोडा र सारथिसहित घाइते पारिदिए, अनि बडो जोडले गर्जना गर्न थाले । अनि अर्जुनकुमार अभिमन्युले बाणबाट उनको घोडा, छत्र, ध्वजा, सारथि, रथको पाङ्ग्रा, धुरी, धनुष, प्रत्यञ्चा, पताका, पाङ्ग्राको रक्षक एवं रथको सबै सामग्रीलाई खण्डखण्ड पारेर उनको हात, खुट्टा, घाँटी र टाउको पनि काटी खसाले । अनि त उनको अनुचरहरू अत्यन्त भयभीत भएर सबै दिशातिर भाग्न थाले । क्रमशः...
द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित त्यस दुर्धर्ष व्यूहमाथि भीमसेनलाइ अगि सारेर पाण्डवहरूले आक्रमण गरे । सात्यकि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, दु्रपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीका पुत्रहरू, शिशुपालका पुत्र, केकय राजकुमार र हजारौ सृञ्जयवंशी क्षत्रियहरू तथा अन्य पनि धेरै रणोन्मत्त योद्धाहरू युद्ध गर्नाको इच्छाले अनायास द्रोणाचार्यमाथि जाइलागे । उनीहरूलाई आपूm नजीक आइपुगेको देखेर पनि आचार्य अलिकति पनि आत्तिएनन्, उनले वाणवर्षा गरेर ती जम्मै वीरहरूलाई अघि बढ्नबाट रोकिदिए । त्यति बेला हामीहरूले द्रोणाचार्यको भुजाको अद्भूत पराक्रम हे¥यौं । पाञ्चाल र सृञ्जय क्षत्रियहरू एक साथ मिलेर पनि उनको सामना गर्न सकेनन् । द्रोणाचार्य क्रोधले रन्थनिएर अघि बढ्दै गरेको देखेर युधिष्ठिरले उनलाई रोक्ने विचार गरे । द्रोणाचार्यको सामना गर्न अरूहरूलाई अत्यन्त कठिन ठानेर उनले यस गुरुतर कामको भार अभिमन्युमाथि थापे । अभिमन्यु आप्mना मामा श्रीकृष्ण र पिता अर्जुनभन्दा कम्ति पराक्रमी थिएनन्, उनी अत्यन्त तेजस्वी तथा शत्रु पक्षका वीरहरूको संहार गर्ने योद्धा थिए । युधिष्ठिरले भने–बाबु अभिमन्यु, चक्रव्यूह भेदन गर्ने ज्ञान हामीहरूलाई ठ््याम्मै छैन । यसलाई त तिमी, अर्जुन, श्रीकृष्ण अथवा प्रद्युम्नमात्रले भेदन गर्न सक्छन् । पाँचौं कोही छैन जसले यो काम गर्न सक्छ । अतः अस्त्र धारण गरेर तिमी शीघ्र यस व्यूहको भेदन गर नत्र युद्धबाट फर्केपछि अर्जुनले हामीहरूलाई उपलाम्भ दिनेछन् ।
अभिमन्युले भने–आचार्य द्रोणको यो व्यूह र सेना यद्यपि अत्यन्त सुदृढ र भयङ्कर छ, तथापि म आप्mनो पितृवर्गको विजयको लागि यस व्यूहमा अहिले नै प्रवेश गर्छु । पिताजीले यस व्यूहको भेदन गर्ने उपाय त सिकाइदिनुभएको छ तर यसबाट बाहिर निस्कने उपाय भने मलाई थाहा छैन । यदि म त्यहाँ कुनै विपत्तिमा परें भने निस्कन सक्दिनँ ।
युधिष्ठिरले भने–वीरवर, तिमी यस सेनाको भेदन गरेर हाम्रो प्रवेशका लागि मार्ग त बनाऊ । अनि तिमी जुन मार्गबाट जानेछौ, हामी पनि तिम्रो पछि लागेर आउने छौं र चारैतिरबाट तिम्रो रक्षा गर्नेछौं ।
भीमसेनले भने–म, धृष्टद्युम्न, सात्यकि तथा पाञ्चाल, मत्स्य, प्रभद्रक र केकय देशका योद्धा–यी सबै तिम्रो साथमा हिंडनेछौं । तिमीले व्यूह भङ्ग गरिदिएपछि, त्यहाँ रहेका ठूल्ठूला वीरहरूलाई मारेर व्यूह ध्वस्त पारिदिनेछौं ।
अभिमन्युले भने–हुन्छ, अब म द्रोणको यस दुर्धर्ष सेनामा प्रवेश गर्दैछु । आज त्यो पराक्रम प्रदर्शन गर्नेछु, जसबाट मेरो मामा र पिता दुवैको कुलको हित हुनेछ । त्यसबाट मामा र पिता दुवैजना प्रसन्न हुनेछन् । यद्यपि म बालक नै छु, तैपनि आज सम्पूर्ण प्राणीहरूले हेर्नेछन् कि एक्लै म कसरी शत्रु सेनालाई कालको ग्रास बनाउनेछु । यदि म बाचुन्जेल युद्धमा मेरो सामु परेर कोही जीवित बच्यो भने म अर्जुनको पुत्र होइन र माता सुभद्राको कोखबाट मेरो जन्म भएको होइन ।
युधिष्ठिरले भने–सुभद्रानन्दन, तिमीले द्रोणाचार्यको दुर्धर्ष सेनाको भेदन गर्ने कुरा गरिरहेका छौ, त्यसैले यस्तो वीरतापूर्ण सोचले तिम्रो बल सदैव बढाइरहोस् ।
सञ्जय भन्दछन्– धर्मराज युधिष्ठिरको कुरा सुनेर अभिमन्युले सारथिलाई द्रोणाचार्यको सेनाको बीचमा रथ लिएर जान अ¥हाए । बारम्बार रथ त्यहा लग्ने आज्ञा पाएपछि सारथिले उनीसित भने–आयुष्मान्, पाण्डवहरूले तपाईंको काँधमाथि यो ठूलो भार दिएका छन्, तपाईं अलिक विचार गर्नुहोस, अनि युद्ध गर्नुहोला । आचार्य द्रोण बडो विद्वान् छन्, उनले उत्तम अस्त्रविद्याको बडो परिश्रम साथ अभ्यास गरेका छन् । यता तपाईं बडो सुख–सयल र आराममा हुर्किनु भएको छ तथा युद्धविद्यामा उनको समान निपूण पनि हुनुहुन्न ।
सारथिको कुरा सुनेर अभिमन्युले हांस्दै भने–सुत, यी द्रोण र क्षत्रियहरू के हुन् ? यदि साक्षात इन्द्र सम्पूर्ण देउताहरूको साथ आई डटे अथवा भूतगणहरूलाई साथमा लिएर आइलाग्छन् भने पनि म सामना गर्न सक्दछु । यी क्षत्रिय समूहलाई देखेर आज मलाई आश्चर्य लागिरहेको छैन । यो सम्पूर्ण सेना मेरो सो¥हौ कलाको बराबर पनि छैन । अरू त के, विश्वविजयी मामा श्रीकृष्ण र मेरा पिता अर्जुनलाई पनि आप्mनो विपक्षमा पाएर मलाई कुनै भय लाग्नेछैन । यस प्रकार सारथिको कुराको अवहेलना गरेर अभिमन्युले उसलाइ शीघ रथलाई द्रोणको सेनाको बीचमा लग्न आज्ञा दिए । यो सुनेर सारथि प्रसन्न त भएनन्, तर घोडालाई द्रोणाचार्यतिर बढाए । पाण्डवहरू पनि अभिमन्युको पछिपछि लागे । उनलाई आपूmतिर आइरहेको देखेर कौरव पक्षका सबै योद्धाहरूले द्रोणाचार्यलाइ अघि पारेर उनको सामना गर्न आई डटे ।
अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु अर्जुनभन्दा पनि बढी पराक्रमी थिए । उनी युद्धको इच्छाले द्रोणको सामु यस प्रकार गई डटे जसरी हात्तीको अगाडि सिंह उभिएको होस् । अभिमन्युको रथ व्यूहतिर दश बीस पाइलामात्र के अघि बढेको थियो, कौरव सेनाले उनीमाथि प्रहार गर्न थाल्यो । अनि त एक अर्काको संहार गर्ने उभयपक्षका योद्धाहरूमा घोर सङ्ग्राम हुन थाल्यो । त्यस भयङ्कर युद्धमा द्रोणाचार्यले हेर्दाहेर्दै व्यूह भेदन गरेर अभिमन्यु भित्र छिरे । व्यूहमा प्रवेश गरेपछि उनीमाथि धेरै योद्धाहरू जाइ लागे तर वीर अभिमन्यु अस्त्र सञ्चालन गर्नमा फुर्तिलो थिए । जो–जो वीर उनको सामु आए, ती सबैमाथि उनले मर्मभेदी वाण हान्न थाले । क्रमशः...।
शरणार्थीहरूको करुण क्रन्दन सुनेर कर्णले भने– ‘वीरहरू हो न तर्स’ भन्दै अर्जुनको सामना गर्न अगि आए । कर्ण अस्त्रशस्त्रहरूमा श्रेष्ठ थिए, उनले आग्नेयास्त्रको सन्धान गरे तर अर्जुनले त्यसलाई शान्त पारिदिए । यसै प्रकार कर्णले पनि अर्जुनका तेजस्वी बाणहरूलाई आप्mनो अस्त्रबाट निवारण गरेर बाणवर्षा गर्दै सिंहनाद गरे। अनि धृष्टद्युम्न, भीम र सात्यकि पनि त्यहाँ पुगेर कर्णलाई आप्mनो बाणबाट व्यथित पार्न थाले । कर्णले पनि तीनवटा बाण हानेर ती तीनै वीरहरूको धनुषलाई काटिदिए । उनीहरूले कर्णमाथि शक्तिहरूको प्रहार गरेर सिंहभैंm गर्जना गर्न थाले । कर्णले पनि तीन/तीन वटा बाण हानेर ती शक्तिहरूलाई नष्ट पारी अर्जुनमाथि बाणवर्षा गर्दै गर्जना गर्न थाले । यो हेरेर अर्जुनले सातवटा बाण हानेर कर्णलाई घाइते पारी उनको भाइलाई मारिदिए, फेरि उनको अर्को भाइ शत्रुञ्जयलाई पनि छवटा बाण हानेर मारिदिए । त्यसपछि एउटा भाला हानेर विपाटको पनि टाउको गिंडेर रथबाट खसालिदिए । यस प्रकार कौरवहरूले हेर्दाहेर्दै कर्णको सामु नै उनका तीन भाइलाई मारेर खसाले ।
तदन्तर, भीमसेन पनि रथबाट हाम्फालेर आई तरबारबाट कर्णपक्षका पन्ध्र वीरलाई मारेर फेरि आप्mनो रथमा गई बसे । यसपछि अर्को धनुष लिएर उनले कर्णमाथि दशवटा तथा उनको सारथि र घोडाहरूमाथि पाँचवटा बाण हानेर घाइते पारिदिए । यसै प्रकार धृष्टद्युम्न पनि आप्mनो रथबाट ओर्लेर अगि बढी चन्द्रवर्मा र निषध देशका राजा बृहत्क्षत्रलाई मारेर पुनः रथमा आई बसे । फेरि अर्को धनुष हातमा लिएर उनले सिंहनाद गर्दै त्रिहत्तरीवटा बाण हानेर कर्णलाई घाइते तुल्याए । यसपछि सात्यकिले पनि अर्को धनुष उचालेर चौसट्ठीवटा बाण हानी कर्णलाई घाइते पारेर सिंहभैंm गर्जना गर्न थाले । फेरि दुईटा बाण हानेर उनले कर्णको धनुषलाई काटिदिएर तीनवटा बाण कर्णको बाहु तथा छातीलाई ताकी प्रहार गरे ।
कर्ण सात्यकिरूपी समुद्रमा डुब्न लागेका थिए, त्यतिबेला दुर्योधन, द्रोणाचार्य र जयद्रथ आएर उनको प्राण रक्षा गरे । अनि त तपाईंको सेनाको सयकडौं पदाति, रथी र हात्तीसवार योद्धाहरू कर्णको रक्षाको लागि दौडिए । अर्कोतिर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, नकुल र सहदेवले सात्यकिको रक्षा गर्न थाले । यस प्रकार त्यहाँ समस्त धनुर्धरहरूको नाश गर्ने खालको महाभयानक सङ्ग्राम हुन थाल्यो । तपाईं र पाण्डवपक्षका वीरहरूमा प्राणको मोह त्यागेर युद्ध हुन थाल्यो । यत्तिकैमा सूर्य अस्ताचलतिर जान थाले । अनि दुवैतिरका थकित एवं रगताम्ये सेना एकअर्कालाई हेर्दाहेर्दै बिस्तारै आआप्mनो शिविरतर्पm फर्किए ।
सञ्जय भन्छन्– महाराज, त्यस दिन अमित तेजस्वी अर्जुनले हाम्रो सेनालाई पराजित गरेर युधिष्ठिरको रक्षा गरे र द्रोणाचार्यको सङ्कल्पलाई सिद्ध हुन दिएनन् । दुर्योधन शत्रुहरूको अभ्युदय हेरेर उदास र कुपित भइरहेका थिए । अर्को दिन बिहानै सबै योद्धाको सामु प्रेम र अभिमानपूर्वक द्रोणाचार्यसित भने–द्विजवर, निश्चय नै हामीहरू तपाईंका शत्रुमध्येका नै हौं र त तपाईंले हिजो युधिष्ठिर नजीक आइपुग्दा पनि उसलाई कैद गर्नुभएन । शत्रु तपाईंको सामु आइपुगेमा तपाईंले उसलाई समात्न चाहेमा सम्पूर्ण देउतालाई साथमा राखेर पनि पाण्डवहरूले तपाईंबाट उसको रक्षा गर्न सक्दैनन् । तपाईंले प्रसन्न भई मलाई यस्तो वरदान त प्रदान गर्नुभयो तर त्यसलाई पूर्ण गर्नुभएन ।
दुर्योधनले यस्तो भनेपछि आचार्य द्रोणले अलिक खिन्न भएर भने– राजन्, तिमीले यस्तो सोच्नुहुँदैन । म त सदैव तिम्रो प्रिय नै गर्ने चेष्टा गर्दछु तर के गर्ने ? अर्जुनले रक्षा गर्छन्, उसलाई देउता, असुर, गन्धर्व, राक्षस, सर्प तथा सम्पूर्ण लोक पनि जित्न सक्दैन । जहाँ विश्वविधाता भगवान् श्रीकृष्ण र अर्जुन छन्, त्यहाँ शङ्करबाहेक अन्य कसको बलले काम दिन सक्छ ? बाबु, यतिबेला तिमीसित सत्य भन्दैछु, यो कदापि अन्यथा हुन सक्दैन– आज, पाण्डवपक्षको एउटा श्रेष्ठ महारथीको नाश गर्नेछु । आज त्यो व्यूहको रचना गर्नेछु, जसको देउताहरूले पनि भेदन गर्न सक्नेछैनन् तर अर्जुनलाई तिमीले कुनै पनि उपाय लगाएर अन्यत्र पन्छाऊ । युद्धविषयक कुनै पनि कला यस्तो छैन, जसबारे अर्जुनलाई थाहा छैन अथवा त्यसलाई फत्ते गर्न सक्दैनन् । उनले युद्धको सम्पूर्ण विज्ञान मबाट तथा अन्यबाट थाहा पाइसकेका छन् ।
द्रोणले यस्तो भन्नेबित्तिकै संशप्तकहरूले अर्जुनलाई पुनः युद्धको लागि हाँक दिंदै उनलाई दक्षिणतर्पm लिएर गए । त्यतिबेला अर्जुनका शत्रुहरूको साथ यस्तो युद्ध भयो जस्तो पहिले कहिले पनि न त देखिएको थियो, न त सुनिएको थियो । महाराज, यता आचार्य द्रोणले चक्रव्यूहको निर्माण गरे । त्यसमा उनले इन्द्रको समान पराक्रमी राजाहरूलाई सामेल गरे र त्यसको किनारमा सूर्यको समान तेजस्वी राजकुमारहरूलाई उभ्याए । राजा दुर्योधन त्यसको मध्यभागमा उभिए, उनको साथमा महारथी कर्ण, कृपाचार्य र दुःशासन थिए । व्यूहको अग्रभागमा द्रोणाचार्य र जयद्रथ उभिएका थिए, जयद्रथको छेउमा अश्वत्थामाको साथ तपाईंका तीसजना पुत्र, शकुनि, शल्य र भूरिश्रवा उभिएका थिए । तदन्तर कौरव र पाण्डवमा मृत्युलाई नै विश्राम ठानी तुमुल र रोमाञ्चकारी युद्ध थालिहाल्यो ।
द्रोणाचार्यद्वारा सुरक्षित त्यस दुद्र्धर्ष व्यूहमाथि भीमसेनलाई अगि पारी पाण्डवहरूले आक्रमण गरे । सात्यकि, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुन्तिभोज, दु्रपद, अभिमन्यु, क्षत्रवर्मा, बृहत्क्षत्र, चेदिराज, धृष्टकेतु, नकुल, सहदेव, घटोत्कच, युधामन्यु, शिखण्डी, उत्तमौजा, विराट, द्रौपदीका पुत्रहरू, शिशुपालको पुत्र, केकय राजकुमार र हजारौं सृञ्जयवंशी क्षत्रियहरू तथा अन्य पनि धेरै रणोन्मत्त योद्धाहरू युद्ध गर्नाको इच्छाले अनायास द्रोणाचार्यमाथि जाइलागे । उनीहरूलाई आपूmनजीक आइपुगेको हेरेर पनि आचार्य अलिकति पनि आत्तिएनन्, उनले बाणवर्षा गरेर ती जम्मै वीरलाई अगि बढ्न रोकिदिए । क्रमशः...
सञ्जयले भने– भगदत्तलाई मारेर अर्जुन दक्षिण दिशातर्पm मोडिए । उताबाट सुबलका दुई पुत्र वृषक र अचल आइपुगेर दुईटै भाइहरूले अर्जुनलाई पीडित पार्न थाले । एकजना अर्जुनको सामु आएर उभे तथा अर्को पछाडि, अनि दुवैले एकैसाथ अर्जुनमाथि बाण हान्न थाले । अनि अर्जुनले आप्mना तीखा बाणबाट वृषकको सारथि, धनुष, छत्र, ध्वजा, रथ र घोडाहरूलाई नष्ट पारेर नानाथरीका अस्त्र र बाणसमूहले गान्धारदेशीय योद्धाहरूलाई व्याकुल पार्न थाले, साथै क्रोधले मुर्मुरिएर पाँच सय गान्धारवीरहरूलाई यमलोक पठाइदिए ।
वृषकको रथको घोडा मारिएपछि उनी हाम्फालेर भाइ अचलको रथमाथि गई बसे । उनले अर्को धनुष उचाले। अब त वृषक र अचल दुवै भाइले अर्जुनमाथि बाण हानेर विचलित पार्न थाले । ती दुवै भाइ रथमाथि एकापसमा टाँस्सिएर बसेका थिए, त्यसै अवस्थामा अर्जुनले एउटै बाण हानेर दुवै भाइलाई मारिदिए । दुवैजना एकैसाथ रथबाट तल खसे । राजन्, आप्mना दुवै मामाहरू मरेको हेरेर तपाईंका पुत्रहरूले आँसु बगाउन थाले । भाइहरूलाई मृत्युको मुखमा परेको हेरेर सयौं प्रकारका मायायुद्धमा पोख्त शकुनिले श्रीकृष्ण र अर्जुनलाई मोहमा पार्नको निम्ति मायाको रचना गरे । त्यतिबेला समस्त दिशा र उपदिशाहरूतर्पmबाट अर्जुनमाथि फलामको गोला, ढुङ्गा, शतघ्नी, शक्ति, गदा, परिघ, तरबार, शूल, मुद्गर, पट्टिस, ऋष्टि, नङ्ग, मूसल, बन्चरो, छुरा, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, अस्थिसन्धि, चक्र, बाण र प्रास आदि अस्त्रशस्त्रहरूको वर्षा हुन थाल्यो । भोको तथा रिसाएका गधा, उँmट, राँगा, सिंह, व्याघ्र, चितुवा, भालु, कुकुर, गिद्ध, बाँदर, सर्प तथा नानाथरीका राक्षस र चराहरू अर्जुनमाथि ओइरिए ।
अर्जुन त दिव्य अस्त्रहरूका ज्ञाता छँदै थिए, अनायासै बाणवृष्टि गर्दै ती जीवजन्तुहरूलाई मार्न थाले । अर्जुनको सुदृढ सायकहरूको आघातबाट ती जम्मै प्राणीहरू आत्र्तनाद गर्दै नष्ट हुन पुगे । यत्तिकैमा अर्जुनको रथमा अँध्यारो भयो । त्यसबाट बडो त्रूmर वाणी सुनिन थाल्यो तर उनले ‘ज्योतिष’नामक अत्यन्त उत्तम अस्त्रको प्रयोग गरेर त्यस भयङ्कर अन्धकारको नाश गरे । उज्यालो भएपछि त्यहाँ भयानक जलधाराहरू झर्न थाले । अनि अर्जुनले ‘आदित्यास्त्र’को प्रयोग गरेर त्यो सम्पूर्ण जललाई सुकाइदिए । यस प्रकार शकुनिले अनेकौं प्रकारका मायाहरूको रचना गरे, तर अर्जुनले हाँसेरै आप्mनो अस्त्रबलबाट ती सबै मायालाई नष्ट पारिदिए । सम्पूर्ण माया नष्ट भएपछि अर्जुनको बाणबाट शकुनि विशेष आहत भएर रणभूमिबाट भागिहाले ।
तदन्तर अर्जुनले कौरवसेनाको विध्वंस गर्न थाले । उनी बाणवर्षा गर्दै अगि बढ्दै गइरहेका थिए तर कोही पनि धनुर्धर वीरले उनलाई रोक्न सकेनन् । अर्जुनको मारबाट पीडित भएर तपाईंको सेना यताउति भाग्न थाल्यो । त्यतिबेला अत्याहटको कारणले तपाईं पक्षका धेरैजसो सैनिकले आप्mनै पक्षका योद्धाहरूको संहार गर्न पुगे । अर्जुन हात्ती, घोडा र मानिसमाथि अर्को बाण हान्दैनथे, एउटै बाणले आहत भएर ती प्राणहीन भएर धराशयी भइहाल्दथे । मारिएका मानिस, हात्ती र घोडाहरूको लाशले भरिएको त्यो रणभूमिको अद्भुत शोभा भइरहेको थियो । सबै सेना बाणको मारबाट व्याकुल भइरहेका थिए । त्यतिबेला बुबाले छोरालाई, छोराले बुबालाई एक्लै छाडेर हिंडिहाल्दथे । मानिसहरूले आपूm चढ्ने सवारी पनि छाडेर भाग्न पुगेका थिए ।
यता, द्रोणाचार्यले आप्mनो तीखो बाणबाट पाण्डवसेनालाई छिन्नभिन्न पार्न थालेका थिए । अद्भुत पराक्रमी द्रोण जतिबेला ती योद्धाहरूलाई कुल्चिदै थिए, सेनापति धृष्टद्युम्नले स्वयम् आएर द्रोणलाई चारैतिरबाट घेरामा हाले । अनि त द्रोणाचार्य र धृष्टद्युम्नको बीचमा अद्भुत युद्ध हुन थाल्यो । अर्कातिर अग्निको समान तेजस्वी राजा नील आप्mनो बाणबाट कौरवसेनालाई भष्म गर्न थाले । उनलाई यस प्रकारले संहार गरिरहेको हेरेर अश्वत्थामाले हाँस्दै भने–नील, तिमीले आप्mनो बाणग्निबाट किन यी योद्धाहरूलाई भष्म पारिरहेका छौं, साहस छ भने मसित एक्लै युद्ध गर । यो ललकार सुनेर नीलले अश्वत्थामामाथि बाण प्रहार गर्न थाले । अश्वत्थामाले तीनवटा बाण हानेर नीलको धनुष, ध्वजा र छत्रलाई काटिदिए । यो हेरेर नील हातमा ढाल, तरबार लिएर रथबाट हाम्फाली अश्वत्थामाको टाउको काट्नै आँटेका थिए कि अश्वत्थामाले भाला हानेर नीलको कुण्डलसहित टाउको छिनाले । नील पृथ्वीमाथि लडिहाले । उनको मृत्युबाट पाण्डवसेनालाई बडो अपशोच भयो ।
यत्तिकैमा अर्जुनले धेरैजसो कौरव पक्षलाई जितेर द्रोणाचार्यले पाण्डवसेनाहरूको संहार गरिरहेको ठाउँमा आइपुगे र कौरव योद्धाहरूलाई आप्mनो शस्त्रको आगोमा पोल्न थाले । उनको सशस्त्रौं बाणबाट पीडित भएर कैयौं हात्तीसवार, घोडसवार र पैदल सैनिकहरू भूमिमाथि लड्न थाले । कैयौं आत्र्तस्वरमा कराउन थाले । कैयौंले लडेर प्राणत्याग गरिदिए । तिनीहरूमध्ये जो कोही उठ्दै–लड्दै भाग्दै गरेका थिए, ती योद्धाहरूलाई अर्जुनले युद्धसम्बन्धी नियमहरूको स्मरण गरेर मारेनन् । भागिरहेका सैनिकहरू– हा कर्ण...हा कर्ण भनेर कराउँदै भागिरहेका थिए । शरणार्थीहरूको करुण क्रन्दन सुनेर कर्णले– वीरहरू हो न तर्स भन्दै अर्जुनको सामना गर्न अगि आए । कर्ण अस्त्रशस्त्रहरूमा श्रेष्ठ थिए, उनले आग्नेयास्त्रको सन्धान गरे तर अर्जुनले त्यसलाई शान्त पारिदिए । यसै प्रकार कर्णले पनि अर्जुनका तेजस्वी बाणहरूको आप्mनो अस्त्रबाट निवारण गरेर बाणवर्षा गर्दै सिंहनाद गरे । क्रमशः...
श्रीकृष्णले बडो फुर्तीका साथ घोडाहरूलाई द्रोणाचार्यतिर मोडिदिए । यो हेरेर सुशर्माले आप्mना भाइहरूलाई साथमा लिएर उनलाई पछ्याए । अनि अर्जुनले श्रीकृष्णसित सोधे– अच्युत, हेर्नुहोस् त, यतातिर त आप्mना भाइहरूका साथमा सुशर्माले मलाई युद्धको लागि हाँक दिइरहेको छ र उत्तर दिशामा हाम्रो सेनाको संहार भइरहेको छ । लौ भन्नुहोस्, यसमध्ये कुन काम हाम्रोलागि हितकर हुनेछ । यो सुनेर श्रीकृष्णले त्रिगत्र्तराज सुशर्मातर्पm मोडिदिए । अर्जुनले तत्कालै सातवटा बाण हानेर सुशर्मालाई घाइते तुल्याएर दुईटा बाणले उनको धनुष र ध्वजालाई काटिदिए । अनि छवटा बाण हानेर उनका भाइलाई सारथि र घोडासहित यमराजको घर पठाइदिए । प्रत्युत्तरमा सुशर्माले ताकेर अर्जुनमाथि एउटा फलामे शक्ति र श्रीकृष्णमाथि एउटा तोमर हाने । अर्जुनले तीन/तीन वटा बाण हानेर शक्ति र तोमर दुईटै अस्त्रलाई काटिदिए र बाणको वर्षा गरेर सुशर्मालाइ मूर्छित पारेर द्रोणतर्पm फर्किए ।
उनले बाणवर्षा गरेर कौरवसेनालाई आच्छुआच्छु पारी फेरि भगदत्तको सामु आइडटे । भगदत्त मेघ वर्णभैंm श्याम रङ्गको हात्तीमाथि सवार थिए । उनले अर्जुनमाथि बाण वर्षाउन आरम्भ गरे तर अर्जुनले बीचैमा सबै बाणलाई काटिदिए । अनि भगदत्तले पनि अर्जुनको बाणलाई छलेर श्रीकृष्ण र अर्जुनमाथि बाणहरूको ओइरो लगाउन थाले । अनि अर्जुनले उनको धनुषलाई काटिदिए, अङ्गरक्षकहरूलाई मारी खसाले तथा भगदत्तसित खेलाँची गरेभैंm युद्ध गर्न थाले । भगदत्तले उनीमाथि चौधवटा तोमर हाने तर अर्जुनले प्रत्येक तोमरको दुई टुक्रा पारिदिए । फेरि उनले भगदत्तको हात्तीको कवचलाई काटिदिए । भगदत्तले एउटा फलामे शक्ति हाने तर अर्जुनले त्यसलाई पनि दुई टुक्रा पारिदिएर भगदत्तको छत्र र ध्वजालाई काटेर उनलाई दशवटा बाण हानेर घाइते पारे । यसबाट भगदत्तलाई बडो विस्मय भयो ।
यस प्रकार अर्जुनको बाणबाट व्यथित भई भगदत्तले पनि क्रोधित भई उनको मस्तक ताकेर कैयौं बाण हाने। यसबाट अर्जुनको मुकुट अलिक बाङ्गो हुन पुग्यो । मुकुटलाई सोभ्mयाउँदै अर्जुनले भगदत्तसित भने– राजन्, अब तिमी यस संसारलाई अघाउने गरी हेरिलेउ । यो सुनेर भगदत्त क्रोधले मुर्मुरिएर अर्जुन तथा श्रीकृष्णमाथि बाण वर्षा गर्न थाले । यो हेरेर अर्जुनले बडो फुर्तीका साथ उनको धनुष र तूणीरलाई काटी बहत्तरीवटा बाण उनको मर्मस्थान ताकेर हाने । यसबाट अत्यन्त व्यथित भएर भगदत्तले वैष्णवास्त्रको आह्वान गरेर त्यसबाट अङ्कुशलाई अभिमन्त्रित गरी अर्जुनको छातीमाथि हाने । भगदत्तको त्यो अस्त्र सबैको नाश गर्ने खालको थियो, अतः श्रीकृष्णले अर्जुनलाई ओटमा पारेर त्यस अस्त्रलाई आप्mनै छातीमाथि थापे । यसबाट अर्जुनको चित्तलाई बडो क्लेश भयो र उनले श्रीकृष्णसित भने– भगवन्, तपाईंले त प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि म युद्धमा केवल सारथिको काम मात्र गर्नेछु तर तपाईंले आप्mनो प्रतिज्ञाको पालना गरिरहनुभएको छैन । यदि म सङ्कटमा परेको भएँ अथवा अस्त्रको निवारण गर्नमा असमर्थ भएको भए तपाईंले यस्तो गर्न उचित हुन्थ्यो । तपाईंलाई थाहै छ कि मेरो हातमा धनुष र बाण छउञ्जेलसम्म म देउता, असुर र मानिसहरूसहित सम्पूर्ण लोकलाई जित्नमा समर्थ छु ।
यो सुनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनसित यी रहस्यपूर्ण वचन भने–कुन्तीनन्दन, सुन, म तिमीलाई एउटा गोप्य कुरा सुनाउँदै छु, जुन पूर्वकालमा घटित भइसकेको छ । म चारवटा रूप धारण गरेर सम्पूर्ण लोकको रक्षा गर्नमा तत्पर रहन्छु । आपूmलाई अनेकौं रूपमा विभक्त गरेर संसारको हित गर्दछु । ‘नाराण’ रूपको एउटा मूर्ति यस भूमण्डलमा रहेर तपस्या गर्दछ, अर्को मूर्तिजगत्को शुभाशुभ कर्महरूमाथि दृष्टि राख्दछ, तेस्रो मूर्ति मनुष्यलोकमा आएर नानाथरीको कर्म गर्दछ, चौथो मूर्ति हजार वर्षसम्म जलमा शयन गर्दछ । त्यो मेरो चौथो विग्रह हजार वर्षको शयनपश्चात् ब्यूँभ्mदा त्यतिबेला वर पाउने योग्य भक्त तथा ऋषिमुनिहरूलाई उत्तम वरदान दिन्छ । एकचोटि जब त्यही समय प्राप्त भएको थियो, पृथ्वीदेवीले गएर मसित वरदान मागेकी थिइन् कि–मेरो पुत्र (नरकासुर) देउता तथा असुरहरूबाट अवध्य होओस् र ऊसित वैष्णवास्त्र होओस् । पृथ्वीको यो याचना सुनेर मैले उसको पुत्रलाई अमोघ वैष्णवास्त्र दिएर ऊसित भने– पृथ्वी, यो अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुरको रक्षाको लागि ऊसित रहनेछ तथा उसलाई अब उप्रान्त कसैले पनि मार्न सक्नेछैन । पृथ्वीदेवीको मनकामना पूर्ण भयो तथा उनी बेस भनेर गइहालिन् तथा त्यो नरकासुर पनि बडो दुद्र्धर्ष भएर शत्रुहरूलाई सन्ताप दिन थाल्यो। अर्जुन, उही मेरो त्यो वैष्णवास्त्र नरकासुरबाट भगदत्तलाई प्राप्त भएको थियो । इन्द्र र रुद्रादि देउताहरूसहित सम्पूर्ण लोकमा कोही पनि यस्तो छैन, जो यसबाट न मार्न सकियोस् । अतः तिम्रो प्राणरक्षाको लागि यस अस्त्रको मार म स्वयंले सहन गरेर यसलाई व्यर्थ पारिदिए । अब भगदत्तसित यो दिव्य अस्त्र रहेन, अतः यस महान् असुरलाई तिमीले मार ।
महात्मा कृष्णले यस्तो भनेपछि अर्जुनले अनायास तीक्ष्ण बाणहरूको वर्षा गरेर भगदत्तलाई ढाकिदिए र उनको हात्तीको दुवै कुम्भस्थलको बीचमा तीखो बाण हाने । त्यो बाण पुच्छरसहित हात्तीको मस्तकभित्र छि¥यो अनि त राजा भगदत्तले बारम्बार हाँक्दा पनि हात्ती अगि बढ्न मानेन र आत्र्तस्वरले चिघार्दै प्राण त्याग ग¥यो। श्रीकृष्णले भने– पार्थ, यो भगदत्त धेरै बूढो भइसकेका छन्, जसको कारण उनको कपाल फुलिसकेको छ । परेला उघार्न नसक्ने भएको हुनाले यिनको आँखा प्रायः बन्द रहन्छ, यतिबेला आँखालाई खुला राख्ने उद्देश्यले परेलालाई लुगाको पट्टाले ललाटमा बाँधेका छन् ।
भगवान्ले यस्तो भनेपछि अर्जुनले बाण हानेर भगदत्तको ललाटको पट्टालाई काटिदिए । पट्टा काटिएपछि भगदत्तको आँखा बन्द भयो । तत्पश्चात् एउटा अद्र्धचन्द्राकार बाण हानेर अर्जुनले राजा भगदत्तको छातीलाई छेडिदिए । उनको ह्दय च्यातियो, प्राण उड्यो र हातबाट धनुष–बाण खस्यो । पहिले उनको मस्तकबाट पगरी खस्यो अनि उनी आपूm पनि पृथ्वीमाथि लडे । यस प्रकार अर्जुनले त्यस युद्धमा इन्द्रका सखा राजा भगदत्तको वध गरे र कौरवपक्षका अन्यान्य योद्धाहरूको पनि संहार गरे । क्रमशः...